November 27, 2021 259
कुनै बेला रत्नपार्कको रुखमा चढेर व्यंग्यात्मक भाषण गरेर चर्चामा आएका मुकुन्द घिमिरेले इङ्गेजमेन्ट गरेका छन् । उनले इन्दिरा संग्रौला`सँग इङ्गेजमेन्ट गरेका हुन् ।
२०५८ देखि २०७० सम्म रत्नपार्कमा भाषण गर्दै हिँड्थे । त्यहाँ त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक लगाइए|पछि अहिले भने सामाजिक सञ्जा`लमा सक्रिय छन् । त्यहाँ आफ्ना विचा|रहरू राख्ने गर्छन् । धेरैले उनको बिहेका बारेमा चासो राख्ने गरेका थिए ।
केहि वर्ष देखि उनले आफ्नो चाहाना इन्दिरा नामक युवतिसंग विवाह गर्ने बताउदै आए|का थिए । ठ्याकै आज उनले सामा`जिक सञ्जालमा तस्बिर अपलोड गर्दै आफुले इन्दिया सँग्रौलासंग इन्गेजमेन्ट गरेको छोटो जानकारी दिएका छन ।
०३५ सालमा भोजपुरमा जन्मिएका मुकु्न्दे ‘भोजपुरमा मोइ खाएर काठमाडौंमा पिसाब फेर्न आउने’ नेपाल देख्न चाहन्छन् ।
बुढेसकालसम्ममा कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर मुलुकको अनुहार फेर्ने महत्वकांक्षा सुनाउने मुकुन्देलाई धेरैले पागल ठान्छन् । तर, उनी भने आाफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भएको दाबी गर्छन् ।
भावी दिनमा रेडिकल डेमोक्र्याटीक राजनीतिक दल खोलेर निर्वाचनमा उम्मेद्धारी दिने योजना रहेको उनले सुनाए ।
‘उत्कृष्ट श्रेणीका विद्यार्थी प्राविधिक डक्टर इन्जिनियर जाने । बल्लतल्ल पास हुनेहरु कर्मचारीतन्त्रमा हालिमुहाली गर्ने । र, फेल हुनेहरु राजनीतिमा लागेकाले देश बिग्रिएको हो । देश बनाउन मास्टर माइन्डहरु राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर नै म राजनीतिमा लागेको हुँ ।’ ०५५ सालमा ६९ प्रतिशत ल्याएर पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानबाट ओभरसियर पास गरेका मुकुन्दे भन्छन् ।
पागलजस्तो एक्लै-एक्दै हिँडेर राजनीति हुन्छ त ? उनी भन्छन्- ‘म स्याटालाइटबिनाको एक्लो बृहस्पति भइरहेको छु । अर्काको पाटीमा लागेर अर्काले भट्याएकोमा देउसिरे भनेर नेता हुन मेरो आत्माले दिँदैन ।’
उनले लेखेका छन- सरप्राइज, इन्गेजमेन्ट, फुलमाल, औंठी साटा`साट, मुकुन्द इन्दिरा, झापा सुरुङ्गा, इन्दिरा सँग्रौला अनि ‘माया’को इमोज
Prevकठै! छोरोको शरीरनै कुहिएर झर्दै छ,आमा रुदै सहयोगको लागि हात फैलाउदै… (भिडियो हे’र्नुस् )
Nextयुवतीले परिक्षामा नम्बर बढाई मागिन्, टिचरले राखे यस्ते प्रस्ताव ! सुनेर छात्रा परिन् चकित
आज तपाईंको दशा ग्रह कस्तो हुनेछ ? हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो (तालिका सहित)
नेपालमा आज १५ संक्रमितको मृ त्यु, यी-यी जिल्लाका हुन् मृ’तक…
सम्पत्ति र दाजु`भाइ नभएका होइ`नन्, तर गजेन्द्रको वास बनेको छ नौबिसे खोला`को पुल
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (79807)